Global Voices teny Malagasy » Diarin’ny Fiarahamonina: Manabe Olontsotra Mpanao Gazety Avy Amin’ny Fotony · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Avrily 2018 5:47 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika Vero
Sokajy: Azia Atsimo, India, Mediam-bahoaka, Tanora
Navoaka voalohany tao amin'ny Rising Voices.
Tetikasa efa 3 taona ny Kalam, mba hahitana tanora avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina voahilikilika ao Kolkata ho lasa mpanoratra mahay mamorona sy mpandinika mpanadihady no sady hanaitaitra ny fahatsiarovantena ara-kolotsaina. Hetsika ho an'ny tanora hitakian'izy ireo ny zony amin'ny fiainany amin'ny alàlan'ny fanoratana ny tantarany manokana, ny fiarahamoniny, ary ny tontolony araky ny hitan'ny masony. Manasongadina  an'izany ny fanambaràny:
“Tsy maintsy miresaka momba ny tenantsika amin'ny alalan'ny tenintsika, ny fehezantenintsika ihany isika. Hosoratana izao ny tononkalo sy ny tantaran'ny andavanandrontsika, ary isika ihany no hanoratra azy ireo. Ary hozaraintsika amin'ny olona rehetra ireo tononkalo sy tantarantsika.”
Misy amin'ny fiteny enina ny teny Kalam (ka-lum) [Hindi, Ordo, Bangla, Nepali, Farsi, Arabo] ary midika hoe penina na pensily hazo na koa fitaovana iray fanoratana. Io no anarana mety indrindra ho an'ity hevitra mendrika deraina ity ho an'ny fiarahamonina misy fiteny maro ao Kolkata. Efa nanao asa mahatalanjona ary namoaka asa tamin'ny alalan'ny printy mba hanohanana ny fahaizamoronana sy ny firesahana momba ny tena amin'ny tononkalo sy fanoratra miavaka.
Fa amin'izao, afaka manampy ny Kalam hanatratra tsara ny tanjony ny teknolojia eo amin'ny aterineto takatrin'ny be sy ny maro.
Nanampy azy ireo nametraka ny “Diarin'ny fiarahamonina” ny fanampiana ara-bola avy amin'ny Rising Voices , izay mampianatra ny tanora fadiranovana mipetraka amin'ireo tanàna mahantra (ambany tanàna) ao Kolkata mba ho lasa olontsotra mpanao gazety. Hitarika atrikasa momba ny saina tia manadihady, fanoratana gazety, teknolojian'ny haino aman-jery ary media vaovao tahaky ny bilaogy, podcast sns… ry zareo. Araky ny tolokevitran'ny tetikasany:
“Hanome tombontsoa an'ilay fiarahamonina nokendrena ny ND — ireo tanoran'ny ambany tanàna (ankizy miasa, zanak'ireo mpampanofa vatana, ary ireo tanora ambany fidirambola mandeha an-tsekoly) — amin'ny fanentanana azy ireo mba handinika sy hanoratra momba ny tantarany manokana sy ny an'ny fiarahamonina misy azy ireo, ny olany, ary ny tranga ara-tantara, amin'ny maha-ampahany manontolo sy mavitrika azy ireo amin'ny fandrafetana ara-kolontsaina sy sosialy ny an-tanandehibe ao India, ary mamoaka azy ireny any anaty bilaogy afaka jerena manerantany. Manampy mampitombo ny fahamendrehana eny anatin'ny fiarahamonina sasany izay mazàna no jerena ho toy ny tsy manankery, tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary koa tsy mahantra ara-kolontsaina io fandaharanasa sy fampiharana io.”
Fantaro ireo olona ao  ambadikin'ny Diarin'ny Fiarahamonina (sy Kalam): Bishan Sammadar , Harleen, Sahar Romani , Rohini, ary Maitrayee (sary etsy ambony avy any ankavia mankany ankavanana)
Ekipanà mpampianatra miaraka amin'ny Urbi Bhadhuri sy Bna Dalui izay notsongaina avy amin'ny dingana fifanentanana nandaniana fotoana ela be .
Faly ny tenanay milaza aminareo fa rehefa vita ilay dingana lavabe  nametrahana ny rafitra avy amin'ny mpitantana, mankeny amin'ireo mpiara-miombona antoka, ny mpiaramonina, nanomboka ihany ny andiàna atrikasa mandritra ny 15 herinandro  nony farany ny Diarin'ny Fiarahamonina. Nanomboka ny 26 Novambra 2007 ny atrikasa iarahana miasaa amin'ny fikambanana tsy miankina ao an-toerana, Sanlaap izay hatao ao amin'ny Lisea Bow Bazzar  ao Kolkata. Tanora 15 mipetraka ao an-toerana ny mpandray anjara izay notsongain'ny Sanlaap, fikambanana tsy mitady tombony ara-bola manampy ireo ankizy vavy noararaotina ara-nofo tao amin'ireo faritra mena ao Kolkata, Paraganas 24 Atsimo sy Atsinanana, miaraka amin'ny trano fialofana ho an'ny tanora sy fiofanana arak'asa. Manana fandaharanasa fampivoarana ny ankizy avy amin'ireo faritra mena ao Kolkata izy io no sady misy fikambanana mpanohana ho an'ireo vehivavy mpampanofa vatana ihany koa.
Vakio eto  ny momba an'ireo mpandray anjara, ny Mpanao Gazetin'ny Fiarahamonin'ny Bow Bazaar, vondrona mavitrika-nà tanora vao misandratra miaraka amin'ny fanahy lehibe sy fahazotoana.
Fametrahana andianà fanontaniana tamin'ireo mpandray anjara ny dingana voalohany :
“Tahaka ny nanatontosànay ireo tantara diso/tsy feno/nitanila momba ireo fiarahamonina tsamihafa, ahoana ny heverinareo ho fihevitry ny olona na fisainan'ny olona hafa ny fiarahamonina misy anao manokana? Inona ireo fitsaratsaram-poana momba ny fiarahamoninao?”
“Heverinao ve fa ilaina ny mitantara ny tantaran'ity fiarahamonina ity amin'ny maha-avy ao anatiny sy mipetraka eto?”
Namaly  ireo mpandray anjara:
Nihomehy ny vondrona raha ny “olana” no zavatra voalohany nanontanian'ny vahiny azy ireo momba ny Bow Bazaar satria mipetraka amin'ny faritra mena izy ireo. Ny hetsika famaranana ity fivoriana fampidirana ity no nitondra an'ireo mpandray anjara hahatsiahy ireo tantara adino na tsy noresahana momba ny mpiray vodirindrina amin'izy ireo ary manoratra tantara/famintsinana kely. Tantara miainga avy amina tranga fandroahana antitra mpifanolobodirindrina, fitiavan'ny tanora ao ambadiky ny fivarotana chai (dite), tovovavy ao amin'ny fiarahamonina terena hampanofa vatana, anadahy mendrika ho deraina mandoa ny fianaran'ny anabaviny ary mandefa azy miverina eny an-tsekoly, ary lalao baolina kitra very noho ny ratra teo amin'ny tongotra.
Ny famenoana ny mombamomba ireo mpandray anjara no natao tamin'ny andro faharoa tao amin'ny Bow Bazaar , mamorona sarintany manokana misy azy ireo sy ny Bow Bazar.
Fijerena ary fisarihana ny fahatsapàna (feo, fofona, hazavana, kasika) ny Bow Bazaar teny amin'ireo mpandray anjara no hita tamin'ny andro telo . Nasaina nisafidy toerana mana-tantara teo amin'ny tanàna ry zareo ary milaza izay antony maha-zavadehibe azy io ho azy ireo.
Tamin'ny faran'ny andro fahatelo, afaka namorona karatra pôstaly mahaliana tahaka ity iray ity ireo mpandray anjara:
Bow Bazaar dia midika…
Ny feon'ireo resadresaka eny an-dàlana mitondra ho any an-trano,
Midika fahitana lehilahy mamo tampona mianjera eo amin'ny tohatra ny Bow Bazaar.
Midika hoe maheno hatsiatsiaka eo ambon'ny tafontranoko ny Bow Bazaar.
An'i Pooja Dolui, 13 taona
Mba asio maso ny Bilaogin'ny Diary (n a misorata anarana aminy) mba hahazo fanavaozana vaovao avy amin'ity tetikasa tokana ity
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/04/26/117792/
 fanampiana ara-bola avy amin'ny Rising Voices: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2007/07/04/congratulations-rising-voices-grantees/
 Fantaro ireo olona ao: http://marginswrite.wordpress.com/2007/09/22/yes-we-are-independent/
 Bishan Sammadar: http://blottingoceans.blogspot.com/
 Sahar Romani: http://writingout.wordpress.com/
 dingana fifanentanana nandaniana fotoana ela be: https://rising.globalvoicesonline.org/kolkata/2007/10/11/monsoon-progress/
 nanomboka ihany ny andiàna atrikasa mandritra ny 15 herinandro: http://marginswrite.wordpress.com/2007/12/08/neighbourhood-diaires-begins-in-bow-bazaar/
 Sanlaap : http://www.sanlaap.org/
 Lisea Bow Bazzar: https://rising.globalvoicesonline.org/kolkata/2007/12/08/glimpse-of-bow-bazaar-highschool/
 ny dingana voalohany: https://rising.globalvoicesonline.org/kolkata/2007/11/27/day-one-in-bow-bazaar/
 andro faharoa tao amin'ny Bow Bazaar: https://rising.globalvoicesonline.org/kolkata/2007/12/05/day-two-in-bow-bazaar/
 no hita tamin'ny andro telo: https://rising.globalvoicesonline.org/kolkata/2007/12/12/bow-bazaar-day-3-part-i/
 Bilaogin'ny Diary (n: https://rising.globalvoicesonline.org/kolkata